News | Tag: china
चिनियाँ उपराष्ट्रपतिसँग परराष्ट्रमन्त्रीको भेट
काठमाडौँ । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आज चीनका उपराष्ट्रपति वाङ क्विशानसँग शिष्टाचार भेट गरे ।
अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामा गरेको हवाई आक्रमणप्रति चीनले दियो यस्तो प्रतिक्रिया
बेइजिङ, चीन । अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले सिरियामा गरेको हवाई आक्रमणको चीनले आलोचना गरेको छ ।
ओलीको भ्रमण तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री चीन यात्रामा
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार (३ वैशाख)मा बेइजिङ प्रस्थान गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे तयारी गर्न उनी चीन जान लागेका छन् ।
चीनले हालसम्मकै ठुलो सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्यो
एजेन्सी । चीनले विवादित दक्षिण चीन सीमामा हालसम्मकै ठुलो शक्ति प्रर्दशन गरेको छ । ठुलो संख्यामा सैन्य बलको उपस्थिति रहेको उक्त सैनिक अभ्यासल सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अजब गजबः आमाबुवाको निधन भएको ४ वर्षपछि बच्चा जन्मियो
एजेन्सी । चीनमा कार दुर्घटनामा परी दिवङ्गत भएको एउटा दम्पतीको चार वर्षपछि सन्तान जन्मिएको छ।
‘चीनलाई जवाफ दिन रेलमार्ग र जलमार्गका कुरा’
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका अवसरमा भारत सरकारले गरेका रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र जलमार्ग विकासमा सहयोग गर्नेलगायतका घोषणा नेपालको सीमासम्म रेलमार्ग पुर्‍याउने उद्घोष गरेको चीनलाई जवाफ भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडाैं । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण भारतलाई जिम्मा दिने योजना बनाएको सरकारले अब भारतीय रेललाई काठमाडौं ल्याउने भएको छ । काठमाडौं आएको चिनियाँ रेल चितवन हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारी योजना सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा भारतीय रेलको गन्तव्य पनि काठमाडौं बनेको छ ।
‘चीन र इयूले अमेरिकी संरक्षणवादविरूद्ध सहकार्य गर्नुपर्ने’
ब्रसेल्स, बेल्जियम । चीनले शुक्रबार यूरोपेली यूनियन (इयू)लाई अमेरिकी संरक्षणवादविरूद्ध संयुक्त अडान राख्नुपर्ने बताएको छ ।
३८ सहर जोखिममा, चिनियाँ अन्तरिक्षयानको अवशेष पृथ्वीको कुन हिस्सामा खस्ला ?
एजेन्सी । एक चिनियाँ अन्तरिक्ष यान आफ्नो मिशन पुरा गरिसकेको र त्यसकाे अवशेष धर्तीमा खस्ने दिन नजिकिएको मिडिया रिपाेर्टमा उल्लेख छ । कहाँ कुन हिस्सामा यो खस्छ भन्ने अनुमान हुन नसके पनि ३८ सहरलाई जोखिममा राखिएको बताइएकाे छ ।
चीनबारे यस्ता छन् अजबगजब कुराहरु
एजेन्सी । पाँच हजार वर्ष पुरानो मानव सभ्यता रहेको चीनको क्षेत्रफल ९६ लाख वर्गकिलोमिटरमा फैलिएका छ । विभिन्न हिसाबले निकै विकसित मानिएको चीनले पछिल्लो पटक पश्चिमा राष्ट्रहरुलाई कडा चुनौती दिदै आइरहेको छ ।
भारत–चीन सम्बन्ध ‘सकारात्मक दिशामा’
बेइजिङ, चीन । चीनले भारतसँगको विवादलाई उचित रूपमा समाधान गर्न चाहेको चीनका विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले बिहीबार बताए ।
यस्तो पनि ! किमको भ्रमणबारे चीन बेखबर
बेइजिङ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन चीन पुगेको भन्ने समाचारप्रति चीनले अनविज्ञता प्रकट गरेको छ ।